6-dii arrimood ee sannadkan ugu waaweynaa deegaannada Soomaalida | Saxil News Network
Image captionMadaxweyne Msutafe Cagjar
Rabshadihii ka dhacay dalka Itoobiya horantii sannadkan ayaa horseeday inuu isbadal baaxad leh ka dhaco dalkaasi, waxaana xisbiga talada haya uu ra’iisul wasaare u doortay Abiy Axmed, oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada, oo la sheego inay yihiin kuwa ugu badan dalka Itoobiya.
Horaantii bishii Siteembar, baarlamaanka Dawlad deegaanka Soomaalida “Itoobiya” ayaa ansixiyey go’aanno aasaasi ah oo la hadal hayey tan iyo markii la magacaabay madaxweynaha cusub, Mustafe Muxumad Cumar.
Sidoo kale xubnaha baarlamaanka waxay isku raaceen in magaca dawlad deegaanka uu noqdo Dawlad-deegaanka Soomaalida, lagana saaro erayga “Itoobiya”, oo la sii raacin jiray.
Image captionCabdi Maxamuud Cumar
Madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa ku eedeeyey madaxii hay’adda sirdoonka Itoobiya, Getachew Assefa, inuu “cabsi galin iyo hanjabaad” ka waday deegaannadooda.
Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa waxa uu ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ka codsaday inuu cafiyo isaga iyo dadka la eedaysan, waxaana taasi xigay in magaalada Addis Abba la geeyay madaxweynihii hore, Cabdi Maxamuud Cumar oo markii dambe lagu xiray halkaas.
26-kii bishii Agoosto, ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo mar wax laga weydiiyay waxaa laga yeelayo mustaqbalka madaxweynihii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar, wuxuu sheegay in arrintiisa ay u taallo sharciga iyo caddaalada dalka Itoobiya.
Labo diyaaradood oo sidday ciidammadaas oo ka soo kicitimay dalka Eritrea ayaa gaaray Jigjiga, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen dadweyne, mas’uuliyiin iyo xubno jabhadda ka tirsan oo ku sugnaa Dowlad Deegaanka Soomaalida, waxaana xigay imaanshaha madaxda ONLF ee magaalada Jigjiga.
Image captionIlhan Cumar
Image captionQaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada iyo kuwii hore
Isla markiiba waxaa arrintaas ganafka ku dhuftay madaxweyne ku xigeennada labo ka mid ah maamul-goboleedyadaas – oo kala ahaa Puntland iyo Galmudug.
Sanatar Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa BBC u sheegay in mas’uuliyadda aqalka sare ay tahay xalinta khilaafka u dhaxeeya dowladda Dhexe iyo maamul goboleedyada, balse arrintaasi ayaa u muuqatay mid aan miro dhalin, waxaana intaasi xigay in madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu muddo kadib sheegay in uusan madaxda maamul goboleedyada kale la qabin fikirka ah in xiriirka loo jaro dowladda dhexe.
Image captionMadaxda maamul goboleedyada ee hadda iyo kuwii hore
“Faragelinta Dowladda Federaalka”
Sidoo kale qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed oo BBC-da la hadlay xiligaasi ayaa sheegay inay habboontahay in dib loo dhigo doorashada, iyagoo Dowladda Federaalka ugu baaqay inay joojiso ”faragelin” ay shegeen inay ku heyso doorashada Koonfur Galbeed.
Image captionMadaxda Soomaaliya
Dowladihii hore, khilaafka noocan ah waxa uu aad u saameyn jiray madaxtooyada iyo xukuumadda, waxaana inta badan mooshinada laga keeni jiray xukuumadda, sababtuna waxa ay ahayd madaxwyenaha iyo Ra’isulwasaaraha oo is qabta.
Image captionMukhtar Robow
Hase ahaatee, dad badan wuxuu uga yaabsaday mowqifkiisii uu ku shaaciyay inuu ka qeyb galayo doorashada madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed, isagoo billaabay ol’ole siyaasadeed oo xoog leh.